ကမ်းလွန်ဘဏ် နေအိမ်သို့တစ်ဦးရဲ့တိုင်းပြည်ပြင်ပမှာဘဏ်အကောင့်ကိုတည်ထောင်ထားသည်။ အဆိုပါရည်ရွယ်ချက်, ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုများအတွက်မကြာခဏ (အကောင့်ကိုင်ဆောင်သူ၏တိုင်းပြည်အပေါ် မူတည်. ) အခွန်ငွေစု, ငွေကြေးသီးသန့်တည်ရှိမှုနှင့်အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့တရားစွဲမှု၏ 96% အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ပေါ်ပေါက်သောကြောင့်, များစွာသောအမေရိကန်ကလူပိုလုံခြုံ climes ၎င်းတို့၏ဥစ္စာဓန secure ၎င်းတို့၏နယ်နိမိတ်ကျော်လွန်ပြီးတရားစီရင်မှုထွက်ရှာကြပါပြီ။
ရံဖန်ရံခါ, သတင်းကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းဆွေးနွေးရန်ခေါင်းကြီးပိုင်းမှာ။ positive သတင်းအာရုံ၏ဤမျှလောက်ကမ်းလွန်ဘဏ်များ၏ seedier ဘက်မှာဖြစ်လေ့ရှိတယ်, အနုတ်လက္ခဏာသတင်းထက်နည်းပါးလာကြော်ငြာရောင်းချ: တရားမဝင်လာဘ်ပုန်းအောင်းနိုင်ငံခြားအာဏာရှင်တွေ, လျှို့ဝှက်စွာနေမကောင်းဆည်းပူးအမြတ်အစွန်းပျောက် socking nefarious စီးပွားရေးသမားများ, အခွန် dodgers, စတာတွေအပြင်, အချို့ ပုံပြင်များအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရဆန့ ်. စည်းမျဉ်းများနှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိသည်။ စည်းမျဉ်းအခွန်ရှောင်မှုကိုထိန်းချုပ်ရန်နှစ်ပေါင်းရာဌာန၌ဖြစ်ရပြီ, မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အခြားတရားမဝင်ရင်းမြစ်များမှအကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်ငွေကြေးခဝါချမှုရန်ပုံငွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်မယ်။ သဘာဝကျကျ, ဖက်ဒရယ်အစိုးရထိုကဲ့သို့သောအကောင့်နှင့်အတူဆက်ဆံသည့်အခါအရေးယူရန်လိုအပ်ပါသည်။
ထိုအစည်းမျဉ်းများတရားမဝင်လှုပ်ရှားမှုများတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်နေကြသည်နေစဉ်, အစိုးရကအားပြိုင်မှုတစ်ခုပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းအသုံးချလိုသူတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူစိုးရိမ်ပူပန်နေကြသည်မဟုတ်။ ထိုကဲ့သို့သော LLCs နှင့်ယုံကြည်မှုအဖြစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းအသုံးပြုခြင်းတရားစွဲမှုတိုး၏ခြိမ်းခြောက်မှုအဖြစ် ပို. ပို. အဖြစ်များဖြစ်လာနေသည်။
အဘယ်အရာကိုရေးမူဝါဒအပြောင်းအလဲများကိုပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်သူတို့မကြာခဏအာရုံစူးစိုက်ရာတိုင်းပြည်အပေါ်မူတည်ပါသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်ကြောင့်အကြမ်းဖက်ခြင်းနှင့်ရာဇဝတ်မှုခြိမ်းခြောက်မှုများများအတွက် သာ. ကြီးမြတ်အလားအလာရှုမြင်ကြောင်းအချို့နိုင်ငံများတွင်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ကြိုးစားနေနှင့်ဖော်ရွေသောဆက်ဆံရေးရှိပြီးသောနိုင်ငံများတွင်စောင့်ကြည့်ဖို့လျော့နည်းဖွယ်ရှိသည်။
ဥပမာအားဖြင့်, ဆွစ်ဇာလန်အစိုးရကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်အတူအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အသုံးအနှုန်းများအပေါ်ပုံမှန်အားဖြင့်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်, အနီးကပ်စောင့်ကြည့်လေ့လာမပေးပါ။ ဒါဟာကန့်သတ် privacy ကိုမူဝါဒအပြောင်းအလဲများရန်သဘောတူခဲ့သည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည်သူတို့နေဆဲကမ်းလွန်အကောင့်ကိုင်ဆောင်သူမှ privacy ကို၏အားကောင်းတဲ့အလွှာပူဇော်သော်လည်း, သောဆွစ်ဘဏ်အကောင့်ကိုဆိုလိုသည်အကောင့်တစ်ခုတရားမဝင်လှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သောအခါသူတို့၏လျှို့ဝှက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဒိုင်းအချို့ကိုလျှော့ချပေးမည်ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိသူများအပါအဝင်နိုင်ငံခြားနေထိုင်သူများမှကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ကိုပူဇော်သည်ဟုအများအပြားတရားစီရင်မှုရှိပါတယ်။ အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာအတော်များများဟာမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်ကာလ၌အချိန်မရွေးအနီးကပ်စိစစ်ခိုင်လုံဖို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရဖို့လုံလောက်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမရှိကြပေ။ ထို့အပွငျကဒီမှာစာရင်းသူများအများစုက၎င်း၏ accountholders ၏တရား-လိုက်နာလှုပ်ရှားမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ခိုင်မာတဲ့ privacy ကိုဥပဒေများရှိသည်။ အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာ၏အချို့တို့ပါဝင်သည်, ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်မဟုတျပါ:
က Man ၏ကျွန်း
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ "ကမ်းလွန်" ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း
အဖြစ်ကောင်းစွာအထက်တွင်တင်ပြနိုင်ငံများစာရင်းတွင်အဖြစ်ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ကကမ်းလှမ်းကြောင်းဆင်တူဘဏ်အကောင့်ကာကွယ်မှုတစ်ခုနှိုင်းယှဉ်အဆင့်အထိရရှိရန်အပြင်ဘက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနထေိုငျသူမြားအဘို့အခွင့်အလမ်းလည်းရှိသေး၏။ ပုံမှန်အားဖြင့်ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ကို အသုံးပြု. သေူမတွေ့ရှိရှိသမျှတို့, အကာအကွယ်နှင့်စွမ်းရည်၏, ပေမယ့်ဥပမာအားဖြင့်, ဝဲ, နိုင်ငံခြားဘဏ်အကောင့်ကိုင်ဆောင်သူမှလက်တဆုပ်စာတတ်၏။ ကော်ပိုရိတ်ဝင်ငွေအခွန်မပါဘဲလုပ်ကိုင်ကြောင်းအနည်းငယ်အခြားပြည်နယ်များလည်းဘဏ်အကောင့်ကိုင်ဆောင်သူမှအကြိုးခံစားခှငျ့ကိုရောက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဤအပြည်နယ်များအချို့သည်နီဗားဒါးဝါရှင်တန်နှင့် Wyoming ပါဝင်သည်။ ကမ်းလွန်သွားကြဖို့အတော်လေးအဆင်သင့်မဖြစ်, သို့မဟုတ်ယူအက်စ်အေပြင်ပတွင်နေထိုင်သူတစ်ဦးကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းအချို့သောရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။ သူကိုအမေရိကန်ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး
အများစုမှာကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဘဏ်စာရင်းထက်လျော့နည်းကုန်ကျစရိတ်ပိုဝန်ဆောင်မှုကိုဆက်ကပ်။ ကမ်းလွန်ဘဏ်များပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ပူဇော်သောအဘယ်အရာထက်ပိုကောင်းတဲ့အတိုးနှုန်းကိုဆက်ကပ်။ အဘယ်ကြောင့်? အဆိုပါကုန်ကျစရိတ်ဘဏ်လုပ်ကိုင်ရန်သောကြောင့်အများအပြားနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များတွင်နိမ့်ဖြစ်ကြသည်။ ဤသည်ငွေထုတ်ထွက်ဆပ်ဖို့ဘဏ်ရဲ့ဘဏ္ဍာအတွက်ကျန်ရှိနေသောပိုပြီးပိုက်ဆံအတွက်ရလဒ်များ။
နိုင်ငံခြားနိုင်ငံသားများအဘို့အကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ကိုခွင့်ပြုကြောင်းအတော်များများကတရားစီရင်မှုပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့နှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ဖို့ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်ပုဂ္ဂလိကတစ်ဦးချင်းစီနှစ်ဦးစလုံး၏ကျယ်ပြန့ဆွဲဆောင်တဲ့အနိမ့်အခွန်နှုန်းကိုအတူပါလာ။ (အမေရိကန်ကလူမသက်ဆိုင်အဆိုပါရန်ပုံငွေများကို "ပြန်ယူဆောင်" သို့မဟုတ်မရခဲ့ကြခြင်းရှိမရှိသို့မဟုတ်မ၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝင်ငွေအပေါ်အခွန်ကောက်ကြသည်ကိုသတိပြုပါ။ )
တည်ငြိမ်ပြီးသာယာဝပြောတဲ့အစိုးရများနှင့်အတူနိုင်ငံများသူတို့နှငျ့အတူတစျဦးရဲ့အိမျနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ, စီးပွားရေး, နိုင်ငံရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးပြဿနာများဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးတစ်ဒီဂရီတတ်၏။ သဘာဝကျကျဤတည်ငြိမ်နိုင်ငံများတွင်သင်နှင့်သင်၏လုပ်ငန်းနှစ်ခုလုံးအတွက်ပိုကောင်းတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရွေးချယ်မှုဆက်ကပ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိစီးပွားရေးသည်၎င်း၏နောက်ဆုံးစီးပွားရေးကျဆင်းမှုထဲကဆွဲထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေ, အတက်အကျဆက်လက်အဖြစ်, ဒီအယူအဆနှစ်ခုလုံးကိုပုဂ္ဂလိကပါတီများနှင့်၎င်းတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမှ ပို. ပို. ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။
ပိုပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။ တစ်ဦးကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသို့မဟုတ်သူမ၏နေအိမ်နိုင်ငံတွင်ဘဏ်အကောင့်နဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့စေခြင်းငှါအဘယျသို့နှငျ့မတူဘဲ, ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ကိုအသုံးပြုရန်ဆုံးဖြတ်သူအများအပြားတစ်ဦးချင်းစီသူတို့အားအကောင့်ပိုကောင်းဖွဲ့စည်းပုံမှာပေမယ့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၏အခွင့်အရေးယူဒီဂရီအပိုင်မသာကြောင်းရှာပါ။ ဥပမာအားဖြင့်များစွာသောဘဏ်များကမ်းလွန်အားလုံးတဦးတည်းအိမ်ခေါင်မိုးအောက်မှာ fixed အကျိုးစီးပွားအကောင့်များစတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု options များ, အဖိုးတန်သတ္တုများ, စတာတွေကိုဆက်ကပ်။
ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်အသုံးချသူတွေကိုတစ်အများစုကမ်းလွန်ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများမှာသူတို့ရဲ့အကောင့်ဖွင့်လှစ်။ ဤရွေ့ကားအဖွဲ့အစည်းများတစ်ဦးချင်းစီ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ပေါ် မူတည်. ကမ်းလွန်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုယုံကြည်မှုနှင့်ရိုးအမြစ်မှကမ်းလွန်ရေနံကော်ပိုရေးရှင်းနှင့် LLCs ကနေအမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်။
ကမ်းလွန်အကောင့်ကိုလည်းကမ်းလွန်, နိုင်ငံတကာန်ထမ်းများကငှားရမ်းထားန်ထမ်း, ခရီးသွားများအတွက်နှင့်ပြည်တော်ပြန်တို့ကအသုံးပြုကြသည်။
ကော်ပိုရေးရှင်း၏ပိုင်ရှင်များကိုလည်းဘဏ္ဍာရေးပြန်လည်ဖွဲ့စည်းဖြစ်စဉ်ကိုအသုံးချဖို့သည့်အခါကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်အားသာချက်များကိုပူဇော်ကြောင်းရှာပါ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေကုမ္ပဏီများကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ကိုသုံးပါနှင့်သူတို့အသုံးပြုတဲ့စာရင်းကိုင်နည်းလမ်းများပေါ် မူတည်. တစ်ဘဏ္ဍာရေးအမြတ်သို့မဟုတ်အရှုံးပြသခွင့်မျိုးစုံအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအသုံးချနိုင်ပါတယ်။ သဘာဝကျကျ, ဥပဒေရေးရာအပြည့်အဝနှင့်အခွန်လိုက်နာမှုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းခဲ့သည်နေကြသည်။
အထက်တွင်ဆွေးနွေးသတင်းအချက်အလက်များအပြင်, ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ဖွဲ့စည်းရန်ရှာကြံကော်ပိုရေးရှင်းများစွာကိုတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အခြေခံမူဝင်ငွေအမြတ်အစွန်း, မြို့တော်အကျိုးအမြတ်နှင့်အခြားအမျိုးအစားများနေထိုင်ရာအကောင့်ကိုင်ဆောင်သူရဲ့တိုင်းပြည်အတွက်အခွန်ကောက်ကြသည်မဟုတ်သောမှားယွင်းသောယုံကြည်ချက်နှင့်အတူဤလိုက်စားချဉ်းကပ်။ ဒါကယူဆချက်နှင့်တဦးတည်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်တိုင်းပြည်အတွက်အခွန်ပေးဆောင်ဖို့ပျက်ကွက်ကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်ကမှငွေရေးကြေးရေးအမှုရှုံးသောအခါဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်မသာပေမယ့်အများဆုံးကိစ္စများတွင်ပါကလည်းတရားမဝင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့်, United States မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအခွန်ပုံစံ 1040 အပေါ်ဖော်ပြထားအဖြစ်အခြားနိုင်ငံများတွင်လုပ်မဆိုပိုက်ဆံအစီရင်ခံရန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားတွေလိုအပ်တယ်တဲ့အခွန်ဥပဒရှိသည်:
"သင်ဥပဒေသို့မဟုတ်အခွန်စာချုပ်အားဖြင့်ကင်းလွတ်ခွင့်မဟုတ်လျှင်, United States ကိုပြင်ပမှာရင်းမြစ်များမှထိုကဲ့သို့သောအကျိုးစီးပွား, ခွဲဝေနှင့်ပင်စင်လစာအဖြစ်, ခဲတညျးရှာဝင်ငွေသတင်းပို့ရမည်။ သင်တို့သည်လည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြင်ပမှာရင်းမြစ်များမှထိုကဲ့သို့သောလုပ်ခနှင့်အကြံပြုချက်များအဖြစ်ရရှိခဲ့သည်ဝင်ငွေသတင်းပို့ရမယ်။ "
ထို့အပြင်ဇယား B ကပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး, သင့်အခွန်ပုံစံအထူးသငျသညျကမ်းလွန်တွင်တည်ရှိသည်ဆိုအကောင့်သို့မဟုတ်ယုံကြည်မှုအတွက်အတိုးများနှင့်ဖြန့်ဝေသတင်းပို့အကြောင်း, အတိုးများနှင့်သာမန် Dividends ၏အမျိုးအစားအောက်မှာတောင်းဆိုပါသည်။
ထို့ကြောင့်, ယူနိုက်တက်စတိတ်အခွန်ပေးဆောင်ခြင်းတစ်ဦးထံမှကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ဆင်ခြေတဦးတည်းသောမကြာခဏကျင်းပထငျမှားရှိနေသော်လည်းအခွန်ပုံစံဖြည့်စွက်ဘယ်သူ့ကိုမှဒီယုံကြည်ချက်မမှန်ကန်ကြောင်းတွေ့နိုင်ပါသည်။ မှန်ကန်သောဥပဒေရေးရာချဉ်းကပ်ကမ်းလွန်ရရှိခဲ့သည်အားလုံးဝင်ငွေသတင်းပို့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့, အများဆုံးနိုင်ငံများက၎င်း၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်၏အပြင်ဘက်တွင်ရရှိခဲ့မည်သည့်ဝင်ငွေအစီရင်ခံရန်ယင်း၏နိုင်ငံသားများနှင့် / သို့မဟုတ်နေထိုင်သူများလိုအပ်သည်။
န်ဆောင်မှုများ Do ကမ်းလွန်ဘဏ်များအဘယ်အရာကိုဝေငှ?
အများစုမှာကမ်းလွန်ဘဏ်များအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘဏ်များကဲ့သို့ဝန်ဆောင်မှုများ၏တူညီသောအမျိုးအစားများကိုဆက်ကပ်။ Plus အားများစွာသောအမှုများအတွက်, သူတို့ကပိုဆက်ကပ်။ သို့သော်၏တရားစီရင်မှုပေါ် မူတည်. ရေခြားမြေခြားဘဏ်များယင်းဥပဒေများနှင့်အခွင့်အလမ်းများကိုအမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်ကို၎င်း, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရတို့ကတိုင်းပြည်အပေါ်ထားရှိသည့်ကန့်သတ်လည်းအတက်အကျနိုင်ပါတယ်။
အငြိမ်းစားအကောင့်များနှင့်ငွေစု options များ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးငွေကြေး, နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုနှင့် Multi-ငွေကြေးလွှဲပြောင်း
တစ်ဦးကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ထူထောင်များသောအားဖြင့်အတော်လေးရိုးရှင်းပါသည်။ ပထမဦးစွာအနေနဲ့ကမ်းလွန်ကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းရန်သို့မဟုတ် LLC ဖွဲ့စည်းသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီပုံမှန်အားဖြင့်ဘဏ်အကောင့်ကဲ့သို့တူညီသောကမ်းလွန်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အတွင်းဖွဲ့စည်းခဲ့ခံရဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ ဒုတိယအချက်မှာဤအကောင့်အသစ်များ၏အများအပြားသွားလာရန်လိုအပ်ကြောင်းမရှိဘဲဖွဲ့စည်းခဲ့နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ဤအကောင့်ထဲကတစ်ခုဖွဲ့စည်းရန်နိုင်စွမ်းအဆင်ပြေလွယ်ကူနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်။ သောကြောင့်သင်တို့ထံကရှေးခယျြနိုငျနိုင်ငံများမျိုးစုံ၏, သင်သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုကိုက်ညီဖို့သင်ရွေးချယ်ထားသောတိုင်းပြည်ကိုက်ညီနိုင်ပါတယ်။
အများစုမှာကမ်းလွန်ဘဏ်များနိုင်ငံခြားငွေနေထိုင်သူများအဘို့အဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်မည်မဟုတ်။ တချို့ကနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်သာယာသောဖြစ်ကြပြီးအချို့လျော့နည်းဒါဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်ကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းအတွက်အထူးပြုထားတဲ့ကျွမ်းကျင်သူထံမှအကူအညီရရန်သေချာစေပါ။ သင်တစ်ဦးဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့လိုအပ်တဲ့သတင်းအချက်အလက်ကိုရနိုင်သူအတွေ့အကြုံရကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးမှုရှိသည်ဖို့ဖြည့်စွက်ရန်ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်နံပါတ်များအဖြစ်ပုံစံရှိပါတယ်။
သင်တစ်ဦးကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ဖွဲ့စည်းကြောင့်သတင်းမီဒီယာအတင်းတချို့၏ရိုးရှင်းစွာ hesitating အကြောင်းကိုစဉ်းစားသုံးသပ်နေကြသည်လျှင်, လိုက်စား, တရားဝင်နှင့်လုံခြုံစိတ်ချစွာပြုမိပါလျှင်, ဘဏ္ဍာရေးလွတ်လပ်ခွင့်, ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, privacy ကိုရှာဖှသေူမှအတော်လေးသာယာသောနှင့်အကျိုးရှိသောဖြစ်နိုင်သည်ကိုသိ နှင့်နည်းပါးလာန့်သတ်ချက်များ။ ကမ္ဘာ့မြို့တော်များအကြောင်းငါးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်မှတဆင့်၎င်း၏လမ်းစေသည်။ ဤသည်ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်အတော်လေးလူကြိုက်များနှင့်ဘုံဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုသည်။
ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်သည်လက်ရှိတွင်ကမ္ဘာ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု၏အကြောင်းကိုနှစ်ဆယ်ခြောက်ရာခိုင်နှုန်းကိုကိုင်ထားပါ။ ဒါကကိန်းဂဏန်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအခြေစိုက်သော်လည်း၎င်းတို့၏အကျိုးခံစားခွင့်၏အားသာချက်ယူကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ကိုအသုံးဖြစ်ကြောင်းများစွာကိုကြီးမားကော်ပိုရေးရှင်းတို့ပါဝင်သည်။ ယူနိုက်တက်စတိတ်၏ခန့်မှန်းငွေပမာဏကမ်းလွန်ဘဏ်များအတွက်ကျင်းပမည့်ယုံကြည်သည်ပိုက်ဆံကမ္ဘာပေါ်မှာဥစ္စာဓန၏ကြီးမားသောအတုံးဖြစ်သည့်အကြောင်းကိုခြောက်လထရီလီယံဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်။